Indlela yokulondoloza inquba yam kwi-SEO ukuba ifayili yenguqu?
Isigqibo esenziwe kakuhle sokutshintsha igama le-domain likhulu, ngokuqinisekileyo. Kodwa ngokuqwalasela ngokuqhelekileyo amagama agxininisayo axhaswe ngemibandela yohlahlo lwabiwo-mali oluvela endleleni eya kuphulukana ngokupheleleyo, abaninzi bethu banokuziva bacinezelekile.
Phakathi kweziphumo ezintle ezenzekayo kwi-SEO emva kokutshintsha kwesizinda, kukulahlekelwa kwexeshana kwendlela yendalo - bakfiets cargo bike price. Umonakalo onjalo uvame ukunyuka kwi-5-20% kwaye kulindeleke kwi-website ye-traffic, ubuncinane kwixesha lokuqala ukuya kwiiveki ezingama-3-4 ezidinga ukufunwa yi-Google ukukhwela i-bots ukufundela ii-URL ezitsha, ukulungiswa okanye enye i-off-page hlaziyo. Okokuqala, uzive ulile, njengalolu hlobo lube lufanelekile ngokufanelekileyo ukuhlawula ilahleko zakho. Ngale ndlela, ndincoma ukufaka isicelo seprojekthi yePPC ekujoliswe kuyo kwigama lakho lomshishini, kunye nezinto eziphambili ezingabonakaliyo ezifanelekileyo ekufuneni.
Ngokuqhelekileyo, isabelo seengonyama sewebhu kunye nabaphuhlisi bewebhu baza kuqala ukuthatha emva kokuba unyango lusebenza, ukuqala ukubuyiswa xa i-SEO yabo kunye nokutshintshwa kwemisebenzi yesiseko sele sele. Kodwa unokuthi uthathe inyathelo elide. Ndiyathetha ukuba unokwenza izinto ezithile zokuqala ukwenza okusemandleni akho ukuncedisa i-Google ngokwalo, kunye nezinye iinjongo zokukhangela, ukuqonda okuthe bhetele oko kuza kwenzeka kwaye wenze ngokufanelekileyo. Ngoko, unokugcina inkqubela yakho kwi-SEO ukuguqula i-domain domain kunye nayo yonke imiyalezo ejikeleze kuyo kwinkqubo engenamsebenzi. Ndibonisa ukuba uzive njengomphathi, ngokulandela oku kulandelelanayo:
Ukwakha kwakhona iikhonkco zakho ezisekelwe kwezinye iindawo eziphezulu zamagunya esizinda. Nangona uxakeke ngokuhlaziywa nokwakha kwakhona i-backlink yakho yangoku kwi-intanethi, zikhululeke ukutolika ukuba kufuneka utshintshe isizinda njengamathuba amatsha amatsha. Ndiyathetha ukuba unokwenza lula ukuba i-backlinks ezitsha ngokutsha emva kweeveki ezilandelayo utshintsho lwesizinda. Ukwenza njalo, uya kuthi uthumele ezinye izibonakaliso ezichanekileyo kunye nentsingiselo kwiGoogle. Yaye ke iya kugqitywa ngezinga eliphezulu kwiSERP emva koko.
Musa ukulibala ukubuyela kwiindawo zakho zangaphambili zangemva kwee-backlinks ezenziwa kwakhona nge-URL entsha. Ingcamango engundoqo apha kukubuyisela i-backlink yakho yemigangatho epheleleyo ngexesha lokunciphisa inani lokubuyisela kwi-domain ngexesha elifanayo. Ukuhamba, ukukhwela kwi-Intanethi usebenzisa isixhobo esikhethekileyo (ndandisoloko ndithembela kuma-ahrefs), fumana i-backlinks yakho negunya elinamandla. Xa sele zikhona, qiniseka ukuqhuba umgudu wokufikelela usebenzisa i-imeyili ukucela ukuhlaziywa kubo bonke.
Ekugqibeleni, ungakulibala ukwenza ukukhushulwa kwegama lakho lezahlulo ngeziteshi zoononophelo loluntu. Ngale ndlela, qalisa ngokuhlaziya i-URL yakho yewebhusayithi kunye negama leshishini lomsebenzi (ukuba likhona) kwiikhokelo ezidumileyo kunye nezihambelana. Kwakhona, kuya kuba yinto enhle kakhulu ukumemezela utshintsho lommandla kwisiganeko kwezinye zeziteshi zoluntu zoluntu. Oku kuya kukunceda ukuba abaphulaphuli baxelele ukuba i-domain yakho kuphela iyakushintsha, kodwa ixabiso eliphakamileyo lemveliso okanye iinkonzo zakho ziya kufana nangoko.